Iyo photovoltaic solar energy boom inodzoka kuSpain | Green Renewables
Iyo photovoltaic solar energy boom inodzoka kuSpain
Tomàs Bigardà | | Updated on 12/02/2018 19:07 | Photovoltaic Solar Energy, Thermal zuva simba, Renewable simba
Guta guru rezvekugadziriswa rinotendeukira kutarisa kuHumambo hweSpain kuita mari muphotovoltaic simba. Kusiyana nemakore gumi apfuura, mari yako zvinoenderana zvakanyanya pamusika pachinzvimbo cheizvo Ministry of Energy inosarudza.
Nehurombo, Bato rakakurumbira rakatyora chengetedzo yepamutemo yenyika, uye izvi zvakatyisidzira varimi. Muchokwadi, zvakakonzera mira munyika uine zuva rakawanda kubva kumativi ese eEurope.
Neraki, kuvandudzika mumusika uye chibvumirano chezvematongerwo enyika cheEurope chakasvika mushure mechibvumirano cheParis chiri kukwezva mari kuSpain yakanangana ne photovoltaic zvakare, iyo inopinda musanganiswa remagetsi isingatombo kufukidza iyo 3% yekuda zvazvino
Nebhizimusi inofungidzirwa pakati pe4% uye 7% paavhareji, kufarira kwemari, mabhangi, vanogadzira maindasitiri uye vatambi vanobatirana anotanga kuburitsa nyowani nyowani musimba rezuva.
Tevere isu tichaenda kunoona mamwe emakiyi:
1 Kudhura kwemitengo yezuva photovoltaic
2 Zuva rakawanda rinowanikwa
3 Iyo yemberi decarbonization
4 Deredza mapepa uye kusadzikira kwekutonga
4.1 PPA (Simba Rekutenga Chibvumirano)
Kudhura kwemitengo yezuva photovoltaic
Ichi ndicho chinhu chakakosha cheiyo kuwedzera kukuru iri kusangana neiyi tekinoroji pasirese. Nhasi, mapikicha e photovoltaic akadhura zvakapetwa kagumi pane zvaaive makore gumi apfuura.
Izvi zvinoreva kuti photovoltaic simba rezuva ratove kukwikwidza pasina kudiwa kwekutsigirwa sepakutanga. Muchokwadi, iyo kudzidza kwekupedzisira yeInternational Renewable Energy Agency (IRENA) inoratidza mashandisiro anoita magetsi ne photovoltaic solar ndiyo yave iyo inodhura pane ese matekinoroji anodzoreka.
Kudonhedza kwakadzika kwemitengo kunokonzerwa nekugadzira muChina, uko kunogoneka 100% yemahwendefa. Vamwe vanachipangamazano vane ruzivo muchikamu ichi vanoyambira kuti zvinofanirwa kutariswa kuti maChina ivo vanogona kutanga kuwana inodhura mutengo wemahwendefa wakapihwa kuti havana makwikwi akakosha pasirese.
Zuva rakawanda rinowanikwa
Chimwe chiitiko chakakosha kana zvasvika pakubheja kuSpain kugona kwenzvimbo ino, kupihwa iyo yakakwirira yezuva zviwanikwa. Muchokwadi, ndiyo nyika muEurope ine mwaranzi yezuva yakawanda inowanikwa. Nyika inotora mukana wayo kushandisa kushanya. Nehurombo, masimba emagetsi haashandiswe. Kana isu tikatarisa iyo data, muSpain vaive vaiswa pakupera kwa2017 4.675 MW ye photovoltaic simba, nepo iri kuGerman, ine simba rezuva iro rakanyanya kushomeka uye riine kuwedzerwa kwakafanana kwenyika, pane atove anopfuura 40.000 MW ari kushanda.
Iyo yemberi decarbonization
Chimwe chinhu chakakosha kubheja pazvinhu zvinowedzerwazve danho repamusoro re compromise iyo European Union yakawana mukurwisa shanduko yemamiriro ekunze uye decarbonisation.
Izvi zvinomanikidza kugumisa kusvibiswa muna 2050 uye izvi zvinosanganisira kuwedzera kukurumidza mukugadzirwa kwemagetsi kuburikidza nemagetsi. Ndosaka nyika dzenhengo dziri kuvhura mafandesi ekuisa aya matekinoroji anovabvumidza kusangana nezvikamu zvavo. Kusangana ne Zvibvumirano zveParis yakasainwa mu2015, nyanzvi dzinonongedzera ku magetsi emagetsi.
Izvi zviri kuita kuti vakawanda vafunge kuti kudiwa kwemagetsi kuchakura zvakanyanya mumakore anotevera. Uchapupu hweizvi ndiko kubheja kwakatemwa kuti mafekitori mazhinji emota ari kugadzirira iyo motokari yemagetsi.
Deredza mapepa uye kusadzikira kwekutonga
Photovoltaic simba rakaratidza mumusheni wekupedzisira unovandudzwa kuti inogona kukwikwidza pasina rubatsiro rweveruzhinji. Ndokunge, pamitengo yemusika. Neraki rwehomwe yehurumende, kutsamira kweHurumende kuri kushoma uye kushoma. Deredza mapepa paunenge uchiisa zvivakwa zvitsva, uye nekuremekedza hwaro hwekutonga, zvinobatsira zvakanyanya kukwezva matsva matsva.
PPA (Simba Rekutenga Chibvumirano)
Sechinyakare, isu tine chigadzirwa chinozivikanwa se PPA (Simba Rekutenga Chibvumirano). Chibvumirano chenguva refu pakati pejenareta iyo inotengesa magetsi pane imwe mutengo uye mutengi anoitenga. Ichi chigadzirwa chiri kukosheswa, zvichipiwa kuti pasina rubatsiro rwehurumende, mabhangi nemari vari kubvumirana kupa mari vachishandisa iyi PPA sechibatiso, izvo zviri kubvumidza budiriro kunze kwemisheni ichangoburwa uye chero mhando yerubatsiro.
Sezvakatsanangurwa nemutungamiriri mukuru wesangano rephotovoltaic UNEF, José Donoso, "kune pakati pe1.000 MW ne2.000 MW kunze kwe4.000 MW yakapihwa mushamba urikugadzirwa izvozvi nePPA kana zvakananga pamutengo wemusika." Kune kunyange vanoda mari kutora njodzi yekusagadzikana kunopihwa nemari inowanikwa kubva kumusika wekutengesa, uyo une shanduko yakakura kwazvo.
Imwe pfungwa yakakosha ndeyekuvandudzwa kufarira kwemabhangi kuti atsigire zvirongwa izvi. Nekudaro, njodzi yemusika uye zvakashata zvakaitika zvekare zviri kuvaita zvakanyanya kuchenjera paunenge uchibaya mari. Nekudaro, maindasitiri masosi anotsanangura kuti kune epasi rese mabhangi ari kushanda zvakanyanya uye acharwisawo veSpanish.
Iyo vise yekugadzira magetsi yaive mumaoko eakakura 'zvishandiso' ichawedzera kupatsanurwa. Iyo oligopoly yekugadzira yakaputsika. Saizvozvo, Pension mari (Allianz, masangano eruzhinji eHontario), e mari yekutengesa (Cerberus, KKR, Oaktree) kana kubva zvisikwa (GIP, Brookfield) vatorwa vari kupinda muchikamu nekutsunga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Iyo photovoltaic solar energy boom inodzoka kuSpain
Gorona del Viento inokwanisa kupa 1.974 maawa nemaakagadziriswa
Izvo zvakanaka kuwedzera zvinowedzerwazve zveEuropean zvibodzwa kusvika ku35%